Ahoana ny fomba nitehirizan’ny nasionalisma ny vakoka kristiana ôrthôdôksa tamin’ny vanim-potoana URSS · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika (ru) i Людмила Томанек, Miriam Palisson, Zo Razafy
Voadika ny 02 Septambra 2018 5:46 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Italiano, русский, Français, 繁體中文, English
Nosoniavin'i Andrei Rublev sy Daniil Tcherny, sary famantarana ny Paska “Fidinana mankany amin'ny Helo” sy “Ny Fiakaran'i Maria” (1408-1410), Tranofitaratra Tretyakov, Moskoa. Sary azo ampiasaina maimaim-poana ao amin'ny Wikipedia.
Tsy manimba ny zavakanto ara-pivavahana mifandraika amin'ny kolontsaina ortodoksa fotsiny ny fitondrana komonista, raha jerena ireo sanganasa telo nahazo aina vaovao indray tato amin'ny aterineto.
Araka ny fijery diso miely any Andrefana, dia hoe nanery ny tsy finoana an'Andriamanitra tamin'ny vahoaka manontolo ny antoko komonista eo amin'ny fitondrana tany amin'ny faritra atsinanana amin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato faha-20. Raha ny marina, sarotra kokoa ny zava-misy ary tsy voatery hankahala ny antokom-pivavahana ny fitondrana sovietika, rehefa tsy manohitohina ny antoko eo amin'ny fitondrana izy ireo.
Ohatra, nandritra ny fampiroboroboana ny fotokevitra laika sy tamin'ny fandraisana ho fananam-pirenena ny fananan'ny mpitondra fivavahana, dia notakian'ny antoko komonista eoropeana amin'ny ankapobeny ny mpikambana ao aminy hanana fijery tsy mpino, ho takalon'ny fahazoana tombontsoa maro sy ny fahazoana ny laharam-pahefan'ny mpitondra.
Noho ny fiheverana fa ampahany tsy azo esorina amin'i rosia imperialy teo aloha ny fikambanana ara-pivavahana, dia iray amin'ireo ifotoran'i Firaisana Sovietika ny hampiorina ny tsy finoana an'andriamanitra eo amin'ny sehatry ny firenena. Tsy nanakana an'i Staline izany, izy izay te-hahazo ny fanohanan'ny Fiangonana Ortodoksa mba hanairana ny fitiavan-tanindrazana hiatrehana ireo Nazi mpanani-bohitra, hamarana tamin'ny taona 1941 ny politika fanenjehana ireo mpino nanomboka tamin'ny taona 1926. Vokatr'izany dia nisy ny fihavaozam-piainana ara-pivavahana tao amin'ny fiarahamonina Rosiana, sy fihavaozan'ny herim-panintonan'ny Fiangonana.
Taorian'ny Ady Lehibe Faharoa dia nahavita nampitony ny fombam-pivavahana ortodoksa ao aminy ny fitondrana komonista tany Eoropa Afovoany sy Atsinanana tamin'ny alalan'ny fampidirana mpitsikilo tao amin'ny ambaratongam-pitantanam-piangonana. Nandritra izany fotoana izany ihany koa no nikarakara endrika nasionalisma tony fihetsika ireo fitondrana ireo, izay mankatoa ny anjara toerana manan-tantara ananan'ny Fiangonana amin'ny fampijoroana ny firenena.
(Nanivaka kosa i Albania notantanin'i Enver Hoxha nanomboka tamin'ny taona 1946 ka hatramin'ny taona 1992, ilay mpanao didy jadona nitarika hatramin'ny taona 1985 nahafatesany, hetsika mahery setra hanafoana ny fiainana ara-pivavahana amin'ny alalan'ny fanakatonana ny toeram-pivavahana rehetra, mba hananganana “Ilay firenena voalohany tsy mino an'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao.”)
Ny kanto ara-pivavahana voafaritra amin'ny fototra ideolojika vaovao
Nalaina ho fananam-panjakana, izany hoe nolazaina ho harem-pirenena sy tantanan'ny fanjakana, ireo kanto ara-pivavahana manana endrika tsara dia tsara. Novaina ho tranombakoka ny fiangonana sy ny moskea, ary novaina dika ho vakoka ara-kolotsaina ny hiram-pivavavahana.
Ohatra, tamin'ny alin'ny Paska tamin'ity taona ity, telo tapitrisa mahery ny isan'ny olona nijery sy nizara tao amin'ny youtube ny rakitra iray tamin'ny taona 1986 ny «Hiram-pideran'ny Kerobima» an'i Tchaïkovski notontosain'ny orkesitry ny minisiteran'ny kolontsaina sovietika (izay niasa tamin'ny taona 1971 ka hatramin'ny taona 1991)
Fa ho an'ny ankamaroan'ny fitondrana komonista, ny maritrano sy ny zavakanto fanehoana, mihoatra noho ny zavakanto ara-pivavahana hafa, ho heverina ho antim-pireharehana fitiavan-tanindrazana.
Izany dia nahatonga ny fisian'ny sanganasa toy ny “Andrei Rublev”. Nalaina avy amin'ny tantaram-piainan'i Andreï Roublev, Rosiana mpanao hosodoko tamin'ny taonjato faha-15 ity sarimihetsika mampihetsipo ity izay notontosain'i Andrey Tarkovsky tamin'ny taona 1966
Tsy vitan'ny mampiseho ny fiainana amin'ny maha mpanakanto fotsiny ihany ilay horonantsary fa miresaka ihany koa ireo olana toy ny kolikoly sy ny fivadihana ataon'ireo saranga mpitondra, ka ampifanandrinina amin'ny fiaretan'ny vahoaka rehefa misy fananiham-bohitry ny vahiny. Voasivana ilay horonan-tsary noho ny herisetra tafahoatra tao anatin'izany, indrindra fa ny habibiana amin'ny biby sy ireo soavaly miala aina eo anoloan'ny fakantsary. Na dia nahazo loka iraisampirenena aza ilay horonantsary dia nanemotra ny famoahana azy tao amin'ny firenena ny manam-pahefana sovietika. Milaza i Tarkovsky fa nahazo ny “tapany farany” izy. Nilaza izy fa nosafidiana hanapaka ny seho lava loatra ary “tsy dia misy dikany” mba hahatongavana amin'ny faharetana adiny telo sy fahefany.
Tamin'ny taona 2011 ny trano famokarana Mosfilm namoaka an-tserasera an'i «Andreï Roublev» tao amin'ny youtube ary amin'ny fidirana malalaka sy maimaim-poana aoanatin'ny fikendrena hampiditra azy ho ao anatin'ny klasikan'ny sarimihetsika rosiana.
Azo jerena ao amin'ny YouTube misy fizarana roa [fa tsy ny firenena rehetra no mahita azy], misy dikany amin'ny teny Anglisy, Frantsay, Alemà, Italiana, Portiogey, Espaniola ary Tiorka ity filman'i Andrei Tarkovsky ity.
«Andreï Roublev», fizarana voalohany.
«Andreï Roublev», fizarana faharoa.
Ohatra fahatelo, fampifangarona ny nentim-paharazana sy ny zava-baovao. Sarimiaina nivoaka tamin'ny 1971, “Ny ady tao Kerjenets” izay nataon'i Ivan Ivanov-Vano sy Yuri Norstein izay nalaina tamin'ny ny tononkalo sariohan'i Nikolai Rimsky-Korsakov. Mampiasa sary an-drindrina sy sary masina nanomboka taonjato faha-14 ka hatramin'ny taonjato faha-16 ilay sarimiaina. Nampiainina tamin'ny refy roa (deux dimensions) araka ny fomba hanetsehana marionety ireo sary an-drindrin'ny fiangonana ireo.
Eto indray isika afa-mahita ny taratry ny lohahevitra fitiavan-tanindrazana toy ny fifaharana sy ny tolona anoherana ny zioga vahiny (na Pechenègues izany, na Napoleon, na Hitler). Raha ny eto, fananiham-bohitra an'i Rus’ nataon'ireo mongol Tatars tamin'ny taonjato faha-13 (nijanona teo ambany ziogany hatramin'ny taona 1480 ny firenena) sy ny anganon'ny tanànan'i Kitèje izay natelin'ny rano tamin'ny fomba tsy fantatra teo am-panafihan'ny fahavalo.
Nampiasa ireo fanoharana ara-pivavahana izy mba hanairana ny fitiavan-tanindrazana. Ho amin'izay tanjona izay ohatra no nampidirana an'i Masina Maria mitrotro an'i Jesoa zazakely ho eo akaikin'ny mpiaro an'i Rosia. Nahazo fankasitrahana imbetsaka tamin'ireo fetibe isan-karazany ity sarimiaina ity, indrindra tany Eoropa Afovoany sy Atsinanana.
Ireo fironana nandritra ireo taona faramparany nikarakaràna ny fikarohana
Tsy any amin'ny firenena tandrefana ihany no mieritreritra fa voarara tanteraka ny fivavahana any amin'ireo firenena ao amin'ny vondrona komonista. Taorian'ny fianjeran'ny kominisma, tamin'ny taona 80 tamin'ny taonjato farany, dia fampianarana nampiroboroboan'ny ankavanana izany hevitra izany tany amin'ny ankamaroan'ny firenena niala tamin'ny komonisma. Ny fitomboan'ny herim-panintonan'ny mpitari-pivavahana tamin'ny resaka pôlitika tao amin'ireo fiarahamonina ireo no nitarika ny fandraràna ho an'ny mpahay tantara sy ny mpanao gazety ny hamolavola petra-kevitra mety ho fisian'ny fifanarahana teo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fivavahana, tamin'ireo fitondrana teo aloha.
Na dia samy manana ny haavom-pangejana ny fahalalaham-pivavahana napetrany aza ny ideolojian'ireo fitondrana komonista, tsy niavaka tamin'ny firindra-keviny ireo fepetra noraisin'ny governemanta hampiharana io politika io. Ny zava-nisy, avy amin'ny fanatsoahan-kevitra mivaingana amin'izay mety hanampy azy ireo hijanonana eo amin'ny fitondrana ny fanapahan-kevitra. Ampiasain'ireo mpandrendri-bahoaka amin'izao fotoana izao izany fomba izay mampidi-doza ny demaokrasia izany, ary tsy mihevitra ny hampiroborobo ireo sangan'asa artistikan'ny fiangonana akory aza ny ankamaroan'izy ireo.
Mba tsy handokoana ny tabilao ho mainty sy fotsy mampifanohitra ny “mpampahory” sy ny “ampahoriana”, dia zava-dehibe, mba hahatakarana ny fomba fiasan'ny fanaovan-didy jadona, ny mandalina amin'ny antsipiriany ny fifandraisana mifaningotsingotra misy eo amin'ny fanjakana komonista sy ny fiangonana.
Nandika (ru) i Людмила Томанек
Nahandro nentim-paharazana Bolgara: fomba iray hamerenana ny fahatsiarovana ara-kolontsaina ny tarhana
Bolgaria 46 minitra izay